ADY TANY AO FARAHALANA - SAMBAVA : Sinoa mibodo tanin’olona nitory ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina
Lasa lavitra ny raharaha mahakasika ilay ady tany misy ao anatin’ny Kaominina Farahalana, Distrikan’i Sambava ankehitriny. Ny ben’ny tanàna ao an-toerana miaraka amin’ny mpanolotsain’ny Kaominina indray no niharan’ny fitoriana. 10 juillet 2019
Hatreto mbola tsy nahitam-bahaolana mazava ny olan’ny ady tany misy ao anatin’ny Kaominina Farahalana, miala tokony ho 5km ny tanànan’i Sambava renivohitra. Tany amina hekitara maro no bodoin’ny mpanam-bola an-keriny fotsiny. Tanim-panjakana izay efa nohajarian’ny fokonolona an-taonany maro. Efa neken’ny teo anivon’ny Kaominina fa hanaovana tetikasa hanitarana ny tanàna io velaran-tany midadasika io. Nomena fahefana feno hanajary izany ny fokonolona ka nisy ireo hazo nambolen’izy ireo tao anatin’ny faritry ny tany.
Ny volana marsa teo anefa nitsangana ny mpanam-bola sy mahitahita milaza fa azy ny tany. Teratany sinoa ity farany, ary anisan’ny nahagaga ny nahazoany titra tamin’ilay tany izay tsy misy afatsy ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany ihany no afaka mamoaka izany. Nanjaka tokana ilay teratany sinoa, notapahiny navadiny ho arina fandrehitra avokoa ireo hazo nambolen’ny fokonolona ary nofefeny ho lasa fananany madiodio ilay tanim-panjakana.
Manoloana io trangan-javatra io dia tsy nipetra-potsiny ny fokonolona fa nisy hatrany ny hetsika nataon’izy ireo. Nisy ny fivoriana notanterahin’ny filan-kevitry ny Kaominina tao Farahalana izay natrehin’ny ben’ny tanàna. Nisy fanapahan-kevitra noraisina tamin’izany izay mamaritra fa tsy azon’olon-tokana alaina io tany io fa mijanona ho fananana iombonana ary azon’ny fokonolona atao manala io fefy io. Ankilany, rehefa nakana ny hevitry ny prefektiora dia nanan-kery ity fanapahan-kevitra ity.
Taorian’izay, tsy nanana fisalasalana intsony ny avy amin’ny kaominina nanokatra ny vavahady fidiran’ny mponina tao amin’ilay tanàna. Tsy nanaiky lembenana ilay sinoa mitonona ho tompon’ny tany fa niampanga azy ireo ho namotika ny fananany. Notoriany ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsain’ny Kaominina, izay namoaka ilay fanapahan-kevitra, izay nahafahana nanokatra ny vavahady. Ny alatsinainy antoandro no nantsoina nohenoina teo anatrehan’ny mpampanoa lalàna ao Antalaha izy ireo. Andrasana izay mety ho fivoaran’ity raharaha ity. Tsy mitsahatra ny manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ireo mponina izay mahatsiaro iharan’ny tsindry hazo lena tanteraka. Lasan’ny mpanam-bola ny tanin’izy ireo, ankilany ahiana ho misy kolikoly avo lenta ao ambadik’ity raharaha ity.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (173) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (83) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020